Wararkii ugu dambeeyey ee Beesha Leel Kase oo Wado Qorsh ay ku…. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Wararkii ugu dambeeyey ee Beesha Leel Kase oo Wado Qorsh ay ku….
Wararkii ugu dambeeyey ee Beesha Leel Kase oo Wado Qorsh ay ku….
Wararka naga soo gaaraya Degmada Bursaalax ee Gobalka Mudug, ayaa Sheegaya in Xiisad Beeleed ay ka taagan tahay Degmadaasi, Iyadoona Saacadihii la soo dhaafay ay jirtay Cabsi soo Food saartay Dadka Shacabka ah, kuwaasi oo ka baqaya in lagu dul dagaalamo.
Xiisadan ka taagan Degmada Bursaalax ayaa ka dhalatay Dil Askar ka tirsan Ciidamada Difaaca Puntland ay u geysteen Taliyihii Qeybta Booliska Degmada Goldogob ee Gobalka Mudug, kaddib Markii lagu amray in ay qabtaan Gaari uu watay Taliyaha oo laga gudbiyay Xog Khaldan ka Gadaal Markii uu ka soo baramuudeeyay Goobaha lagu Hubiyo amaanka.
Garoowe.net ayaa horey u shaacisay in Beesha uu ka dhashay Taliye C/xamiid (Leelkase), ay ka biyo diideen in Kiiska Dilka taliyaha ay Dowladdu la wareegto Maadama Taliyaha la dilay Askarta wax dishayba ay ka tirsanaayeen Ciidamada Difaaca Dowladda Puntland.